माओवादी भित्रको लफडाले देउवा सरकारनै समस्यामा, ६० जना माओवादी सांसद मन्त्रीको दौडमा ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
माओवादी भित्रको लफडाले देउवा सरकारनै समस्यामा, ६० जना माओवादी सांसद मन्त्रीको दौडमा !
२०७८ श्रावण १०, आईतवार २०:४३:००
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेस भित्र पनि मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकस भइरहेकावेला माओवादी केन्द्रमा झन समस्या आएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले शनिवार एउटा कार्यक्रममा माओवादीका सवै सांसदलाई मन्त्री बन्ने रहर जागेकोले दिमागमा आतंकनै आएको बताए । माओवादीका ४९ जना सांसदनै मन्त्री बन्नका लागि अध्यक्ष दाहाललाई दवाव बढाउँदा माओवादीले मन्त्री टुंगो लगाएको छैन।
हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी कुल ६३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रबाट अहिले मन्त्री भइसकेका र हुन नमिल्नेबाहेक सबैले मन्त्री बन्नका लागि हानथाप गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा ४९ र राष्ट्रिय सभामा १४ गरी संघीय संसद्मा माओवादीका ६३ जना सांसद छन । प्रचण्डका अनुसार त्यसमध्ये ६० जना मन्त्रीका आकांक्षी छन ।
प्रचण्ड आफैँ पूर्वप्रधानमन्त्री भएका कारण, अग्नि सापकोटा सभामुख भएका कारण र शशिकला श्रेष्ठ (दाहाल) राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भएका कारयण मन्त्रीको दौडमा छैनन । यसबाहेकका ६० जना सांसदमध्ये जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भइसकेका छन । अहिले बाँकी ५८ जना सांसद मन्त्री हुने दौडमा छन्, तर पाँच दलको संयुक्त गठबन्धनबाट बनेको देउवा सरकारमा माओवादीको भागमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय परेका छन ।
माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको यो विद्रुप चित्र पहिलोपटक सार्वजनिक भएको भने होइन । यसअघि पनि केही सांसदहरूले मन्त्री हुन नपाए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत पार्टी नेतृत्वलाई दिएको सार्वजनिक भएको थियो । यसपटक पनि केही सांसदहरूले यस्तै धम्की दोहो¥याउने गरेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी बन्यो । उक्त सरकारमा माओवादीका ६ जना मन्त्री बने । ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा १५ जना मन्त्री बने । ०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पटक–पटक हेरफेर हुँदै १४ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री बने । यस्तै ०६९ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा १४ जना मन्त्री बने । ०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सातजना मन्त्री बने भने ०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पाँचजना मन्त्री बने ।